မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: နှင်းစက်ခြေရာ (၂)
"ဟဲ့ .. ငရဲ.. ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ငါ့အစ်မကို တွေ့လိုက်လား.." နွေနှင်း ပြုံးစိစိနှင့် ရဲသွေးကိုမေးလိုက်သည်..
"အေး.. တွေ့တယ်ဟ.. နင့်အစ်မကနင်နဲ့ တခြားစီပဲ.. ရိုးရိုးအေးအေးလေး..မိုက်တယ်.. နင်များ.... မျက်စိကိုနောက်နေတာပဲ.."
နွေနှင်းကျိတ်၍ရယ်မိသည်.. ဒါပေမဲ့ သူမကို အမြဲ မျက်စိနောက်စရာကောင်းသည်.. ပြာကလပ်စိန်ဖြစ်နေသည်..ဆိုပြီး အကောင်းမပြောတတ်သော ရဲသွေးကို မကျေနပ်ဖြစ်မိသည်..
("ငါ့ကို အမြဲ မကောင်းပြောတဲ့ငရဲ သိမယ်.. သေဖို့သာပြင်.. ငါက နင့်ကိုသနားလို့ပြောပြမလို့.. ခုတော့ မပြောချင်တော့ဘူး..") နွေနှင်းစိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးလိုက်သည်..
နွေနှင်းသိလိုက်သည်.. သူမလက်တွင် အမြဲဝတ်ထားလေ့ရှိသော ကျောက်စိမ်းနှင့်ရွှေလက်စွပ်ကို ကြာသပတေးနေ့ကချွတ်ရန်သူမမေ့နေခဲ့သည်... နွေနှင်းလက်ကို နောက်တွင်ဝှက်ထားပြီး...
နွေနှင်းအခက်တွေ့ရသည်.. သူမစထားသောကိစ္စကို သူမပြောပြလိုက်မှသိစေချင်သည်... သူဖော်လိုက်၍ သိလျှင် သူမသိက္ခာ ကျသည်.. ("ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ.. ငါဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ...")
"ပြလေဟာ.. ဟား ဟား.. နင်ငါ့ကိုနောက်နေတာမှတ်လား.. နင့်အစ်မဆိုတာမရှိဘူးမှတ်လား.. "
("ငါဘာပြောရင်ကောင်းမလဲ...ဟာ.. အကြံရပြီ.. ၁ချက်ခုတ် ၂ချက်ပြက် အကြံရပြီ..")
နွေနှင်းသူမလက်ကို ရဲရဲတင်းတင်း ထုတ်ပြလိုက်သည်..
"ဒီမှာ.. ဒီမှာ..အဲဒါဘာဖြစ်လဲ.. ငါ့လက်နဲ့ငါ့အစ်မ ကိစ္စနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ.. နင့်ပဲငါက အားအားရှိစရအုံးမယ်.." နွေနှင်း ပါးစပ်မှ ရန်တွေ့ရင်းခပ်တည်တည်ပြောလိုက်သည်...
"ဟား... ဟား... ဒီမှာလေ နင့်လက်စွပ် ကြာသပတေးနေ့ကလဲ ဒီလက်စွပ်ကြီးနဲ့ပဲ.. အဲဒိနေ့ကလဲ နင်ပဲမှတ်လား.."
"အန်... ဟား ဟား.. လက်စွပ်နဲ့များဟာ.. ဒီလိုဟ.. ငါနဲ့ငါ့အစ်မနဲ့ကို ငယ်ငယ်လေးထဲက ချူချာလို့ ကျောက်စိမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ ဆင်တူဝတ်ထားတာဟ.. အမွှာပဲဟာ.. ဆင်တူရှိတာဆန်းလား.. အင်္ကျိဆိုလဲ ငါတို့ ၂ယောက်လုံးမှာဆင်တူရှိတယ်.. သူက ဒိုက်ကောဆိုတော့ ငါ့လိုလှအောင်မ၀တ်တတ်ဘူး.. အဖွားကြီးကိုက်..." နောက်နေ့များတွင် အင်္ကျိမထပ်အောင်ဝတ်ရန် နွေနှင်းရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဟုတ်.. အဲဒိအတွက်ပါကြိုတင်ပြောထားရမည်...
ရဲသွေးခဏတာ တွေဝေသွားသည်.. "ဒါဆို သူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ.. နင်တို့၂ယောက်တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံပြ.."
ရဲသွေး နာမည်မေးမည်ဆိုသည်ကို ကြိုတင်တွက်ထားပြီးဖြစ်သော နွေနှင်းအတွက် သိပ်မခက်ခဲပါ..
"လူကိုမယုံသင်ကာနဲ့.. အားလုံးပြောပြမယ်... ထပ်မမေးနဲ့.. ငါ့အစ်မနာမည်က မေနှင်း.. ၅မိနစ်ပဲခြားတာ.. ငါတို့၂ယောက်ကအရမ်းတူတာ.. အိမ်သားကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူသိပ်မခွဲတတ်ဘူး.."
နွေနှင်း ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးသားများကို ဟန်ပါပါပြောပြလိုက်သည်..
ရဲသွေးက ယုံတ၀က် မယုံတ၀က်မျက်လုံးနှင့်ကြည့်သည်..
"နင်ကသိပ်ယုံရတာမဟုတ်ဘူး.. စစခင်ခြင်းထဲက ငါ့ကိုဖောနေတာ.. "
ရဲသွေးခုလိုပြောလိုက်တော့... နွေနှင်းမလုံမလဲဖြစ်သွားသည်.. ရဲသွေးကို ပို၍ယုံစေချင်လာသည်.. မခံချင်စိတ်ဖြင့် နွေနှင်းပါးစပ်မှလွှတ်ခနဲထွက်သွားသည်..
"မယုံဘူးလား.. ငါနဲ့ငါ့အစ်မနဲ့က basic တန်းတုံးက တူတူတတ်ဖူးတယ်.. ခုအတန်းကျမှ သူက ကြာသပတေးပဲ အားလို့၂ယောက်အလှည့်နဲ့တတ်တာ.. မယုံရင်ဆရာမကိုမေးကြည့်ပါလား.. ဆရာမအတန်းကိုတတ်ခဲ့တာပဲ.. "
"အေး.. မေးမယ်.. မယုံဘူး.. အတန်းပြီးရင်သွားမေးမယ်.."
"သွားမေးပေ့ါ..နင်မယုံရင်.." ခပ်ပျော်ပျော်စနောက်တတ်သော ကိုယ့်ဆရာမအကြောင်း နွေနှင်းကောင်းကောင်းသိသည်..
အတန်းဆင်းတော့ အတန်းသားများအားလုံးကုန်အောင် ရဲသွေးစောင့်နေပြီး.. ဆရာမဆီသွားကာ..
" Teacher Teacher... နွေနှင်းမှာအမွှာအစ်မရှိတယ်ဆို? အဲဒါဟုတ်လား...?" ရဲသွေးအဲလိုမေးလိုက်တော့ ဆရာမကလဲကြောင်ကြည့်နေပြီး..
"ဘာလဲသား... ဘာကိုပြောတာလဲ".. ဆရာမထိတကယ်မေးလိမ့်မည်ဟု ကြိုမတွက်ထားမိ၍ တိုင်ပင်ကိုက်မထားမိသောကြောင့် နွေနှင်းအခက်တွေ့နေရပြီ...
နွေနှင်း ရဲသွေးနောက်မှကပ်လိုက်သွားပြီး.. ဆရာမနားမရောက်ခင်ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ..
"တီချယ်ရေ..အဲမှာငရဲကသမီးမှာ အမွှာအစ်မရှိတာမယုံဘူးတဲ့.. မေနှင်းလေ.. သမီးအမလေ.. basic တန်းတုန်းကတောင် သမီးနဲ့တူတူတီချယ်အတန်းပဲတက်ခဲ့တာလေ..." စကားပြောရင်း ဆရာမကို information အကုန်ပေးလိုက်သည်..
ရဲသွေးနောက်ကျောပေးထား၍ ဆရာမကိုအချက်ပြမျက်စိမှိတ်ပြလိုက်သည်.. ဆရာမသဘောပေါက်သွားပုံရသည်.. ပြီးနောက် စိတ်ချရလောက်သောအခြေအနေရှိပြီဖြစ်၍...
"ငါရှိနေရင်နင်မယုံမှာစိုးလို့.. သွားတော့မယ်.. မယုံရင်နင့်ဟာနင်ပဲဆရာမကိုမေးလိုက်တော့.."
ပြောရင်းဆိုရင်းရဲသွေးကိုကျော်တက်ကာနွေနှင်းအတန်းပြင်ထွက်သွားသည်..အတန်းထောင့် နားပြန်ကပ်၍နားထောင်လိုက်ရာ...ဆရာမ၏ "ဟုတ်တယ်..သားရဲ့....." ဆိုတဲ့ထောက်ခံသံကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်.. နွေနှင်းပြုံးစိစိဖြင့်အိမ်ပြန်လာခဲ့သည်.. လာမည့်ကြာသပတေးနေ့တွင်လဲမေမေ့ထမိန်ငှားဝတ်ရအုံးမည်...
----------------------------- ။ ---------------------------------
ထိုနေမှစ၍ ရဲသွေးအတော်လေးယုံသွားသည်.. နွေနှင်းကို၂ယောက်တွဲရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံတောင်းရုံမှလွဲ၍ သူအကြွင်းမဲ့ယုံသည်ဆိုသည်ကို နွေနှင်းမှန်းလို့ရသည်...
"ဓာတ်ပုံလား.. ပြမယ်.. ဒီနေ့ မေ့ကျန်ခဲ့လို့... "
အမှန်တော့ နွေနှင်းသူ့ကိုဒီလောက်ကြာကြာ စဖို့စိတ်ကူးမရှိ... ဒီလောက်သူယုံလိမ့်မည်ဟုလဲမထင်.. အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်.. နွေနှင်း၏စကားများတတ်သောအကျင့်ကို သူသေချာကြည့်လျှင်တွေ့နိုင်သည်... နွေနှင်းအတွက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ပုံမှန်ထက်ထူးခြားလုပ်ရခြင်းဟူ၍ လုံချည်ဝတ်.. ဆံပင်စည်းကာ အတန်းတွင်းရောက်လျှင် သူ့ကိုစကားမပြောပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရုံပင်ဖြစ်သည်..
နွေနှင်းအတွက် သိသိသာသာမပြောင်းလဲသော်လဲ.. ကြာသပတေးနေ့များတွင် ရဲသွေးတစ်ယောက် သာမန်ထက်ပို၍ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်စားလာတတ်သည်ကိုတော့ တဖြည်းဖြည်းသတိထားမိလာသည်.. တနလာင်္ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့များတွင် နွေနှင်းအား မေနှင်းအကြောင်းများမေးတတ်သည်..
တခါတရံ စသလို နောက်သလိုဖြင့် မေနှင်းကို သူသဘောကျသည် အောင်သွယ်ပေးရန်ပြောတတ်သည်.. ထိုသို့ပြောတိုင်း နွေနှင်း သူ့ကို စကားကောင်းကောင်းမပြောချင်.. သူမေးဖန်များလာတော့ နွေနှင်းစိတ်ရှုပ်လာသည်..
"မေနှင်းလား.. သေပြီ..." ဟုဘုပြန်တောတတ်သည်..
အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တိုင်းလဲ.. နွေနှင်းနဲ့ဖုန်းပြောတိုင်း မေနှင်းဘာလုပ်နေလဲဟုမေးတတ်သည်..
"မေနှင်းလင်နောက်လိုက်သွားပြီဟာ.. မမေးနဲ့တော့.. ရှိတော့ဘူး.. ငါ့ကိုခင်လိုဆက်တာမှမဟုတ်တာ.. သူ့အကြောင်းသိချင်လို့ ဆက်ရင် နောက်.. ငါ့ဆီဖုန်းမဆက်နဲ့"
"နင်ဟာလေ.. မိန်းကလေးဖြစ်ပြီး နင့်အစ်မလို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ကိုမရှိဘူး.. " ဟု နှိုင်းယှဉ်ပြီး အပြစ်ပြန်ပြောတတ်သည်..
တခါကတော့ သူပြောတာကို နားညီးလွန်း၍ အိမ်ကို အလည်ရောက်နေသော ညီမတ၀မ်းကွဲနှင့် မေနှင်းဆိုပြီးဖုန်းပြောခိုင်းလိုက်ရသည်..
ညီမလေးကို ဘာပြောလဲလို့မေးကြည့်တော့.. ဘာမှမပြောဘူး.. နွေနှင်းနောက်နေတာ..ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး.. ငြိမ်နေတယ်ဟုပြောသည်..
သို့သော် ရဲသွေး မေနှင်းအကြောင်းကို မေးတိုင်း နွေနှင်းစိတ်ထဲတွင် ကသိကအောင့်ဖြင့် မနာလိုစိတ်လိုလိုဖြစ်မိသည်.. သူမထက် သူမဖန်တီးထားသော မေနှင်းကိုပို၍ စိတ်ဝင်စားနေသော ရဲသွေးကိုလဲမကျေနပ်ဖြစ်မိသည်..
မေနှင်းအနေဖြင့်လာသောနေ့များတွင် ရဲသွေး၏ အကြည့်များကို ကျိတ်၍ကျေနပ်မိသည်.. ထိုနေ့များတွင် သူနှင့်တခါတရံ စကားပြောရန်ကျလျှင် သူ၏ ရှက်သလိုလိုဖြစ်နေသောပုံကို နွေနှင်းသဘောကျမိသည်.. နွေနှင်းအဖြစ်လာလျှင် သူ၏ သာမန်ပုံစံကို ကောင်းကောင်းသိထားသော နွေနှင်းအဖို့ မေနှင်းနှင့်သူစကားပြောလျှင် သူ၏ပြောင်းလဲမှုများကို ကောင်းကောင်းသတိထားမိသည်..
မေနှင်းကို သူမအားကျသည်.. မနာလိုဖြစ်သည်..
("မေနှင်းဆိုတာလဲ ငါပဲ.. နွေနှင်းဆိုတာလဲ ငါပဲ.. မေနှင်းကိုကြည့်တာလဲငါ့ကို ကြည့်တာနဲ့တူတူပဲလေ") လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ဖြေပြီးတွေးမိတိုင်း ရှက်လဲရှက်သည်.. သိမ်ငယ်စိတ်လဲ ဖြစ်မိသည်..
မေနှင်းကို ကြည့်သော အကြည့်မျိုးကို နွေနှင်းအနေဖြင့် အကြည့်ခံချင်လာသည်..
တခါတရံ.. ကြာသပတေးနေ့တွင် မေနှင်းကဲ့သို့ ၀တ်ဆင်လာပြီး.. ရဲသွေးနှင့် လှေကားအတက်၌ ဆုံလျှင် ရဲသွေးက နှုတ်မဆက်ပဲတက်သွားတတ်သည်..
သို့သော် နွေနှင်းစိတ်ထဲမှ ရဲသွေးထူးခြားနေသည်ကို ခံစားလို့ရသည်.. အရင်က ရဲသွေးကို ယောင်္ကျားတစ်ယောက်အဖြစ် ထိုကဲ့သို့ နွေနှင်းမခံစားဖူး..
တချို့ ကြာသပတေးနေ့တွင် ရဲသွေး ၀တ်ကောင်းစားလှဝတ်လာလျှင် အမြင်ကပ်ကပ်ဖြင့်...
" ဟဲ့.. ငရဲ.. ငါ့ကိုတောင်မခေါ်ဘူး.. နင်က ဘာဖြစ်နေတာလဲ.. "
"ဟာ.. နွေနှင်း ငါက နင့်အစ်မမှတ်လို့.. နင်က ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး လုံချည်နဲ့.. ဆံပင်တွေဘာတွေ စည်းလာတာလဲ.. ဒီနေ့ကြာသပတေးလေ.. နင့်အစ်မမလာဘူးလား " ပြောရင်း နောက်ကို မျှော်လင့်တကြီး ရှာနေသည်..
" ငါ့အစ်မ မအားလို့.. ငါပဲလာတာ.. တမင်နင့်ကိုနောက်ချင်လို့ ဒီလိုဝတ်လာတာ.. ဘာလဲ ငါလာတာများတော်တော်စိတ်ပျက်သွားတဲ့ပုံနဲ့ "
"အေးဟာ.. နင့်တွေ့ရတာ တော်တော်စိတ်ပျက်တယ်.. ဟား.. ဟား... ငါ့မှာ ၄ရက်မှာ ၁ရက်ပဲ သူ့ကိုတွေ့ရတာ.. ဒီမျက်နှာကြီးမမြင်ချင်ပါဘူး.. "
"သေနာ.. မမြင်ချင်လဲ သေလိုက်ဟာ.. " ဟုနွေနှင်းပြောပြီး ခြေစောင့်ကာ ရဲသွေးအားတွန်း၍ လှေကားကို ပြေးတက်သွားသည်..
ရဲသွေးကို ဟန်ဆောင်ပြန် ရန်တွေ့လိုက်သော်လဲ နွေနှင်း စိတ်ထဲတွင် ၀မ်းနည်းမိသည်..
အမှန်အတိုင်းပြောပြလိုက်ချင်သည်.. သူမပြောပြလိုက်လို့.. နောက်ဆို ၄ရက် ၁ခါတောင် ရဲသွေးရဲ့ အကြည့်နွေးနွေးတွေကို မရမှာ စိုးရိမ်မိသည်.. ရဲသွေးစိတ်ဆိုးမှာလဲ စိုးသည်.. ရဲသွေးစနောက်ကာပြောသောစကားထဲတွင် မေနှင်းကို တွေ့ချင်တာ အမှန်ဆိုတာကို သူမခံစားလို့ရသည်..
သူမ၏ ရန်တွေ့လိုက်သော စကားတွင် သိမ်ငယ်စိတ်နှင့် မနာလိုစိတ်ပါနေသည်ဆိုတာကိုရော ရဲသွေးမှ သိပါလေစ...
-------------------------------- ။ ---------------------------------------
ဒီနေ့ နွေနှင်းစိတ်တွေလေးနေသည်.. အကြောင်းရာ တခုခုကို သူမ လေးလေးနက်နက်ဆုံးဖြတ်ရတော့မည်.. ဒီနေ့ သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့... ကြာသပတေးနေ့.. ဘာလိုလိုနဲ့ မေနှင်းဆိုသည့် စိတ်ကူးယဉ်လူသားတစ်ယောက် ရှိခဲ့သည်မှာ ၂လနီးပါးရှိခဲ့ပြီ...
မေမေ့ဘီရိုကို ဖွင့်ရမလား.. သူမဘီရိုကိုပဲဖွင့်ရမလား.. သူမစိတ်ထဲတွင်တော့ သူမကို နွေနှင်းအနေဖြင့်သာ လက်ခံစေချင်သည်မှာ အမှန်တကယ်..
နွေနှင်း အနေဖြင့် သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့တွင် ရဲသွေးရဲ့ အကြည့်နွေးနွေးတွေကို လိုချင်မိသည်.. ရဲသွေးကို မေနှင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ပြောရသည့်အချိန်တိုင်း၌ အပြစ်ရှိသလိုခံစားရသည်.. ကသိကအောင့်ဖြစ်မိသည်.. သူမ ၏ အချစ်ပြိုင်ဘက်သည်.. သူမကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေအောင်.. သူမကိုယ်တိုင်ပင် ဖန်တီးခဲ့ခြင်းအတွက်.. သူမကိုသူမပဲ အပြစ်တင်မိသည်..
("နင့် နှလုံးသားပေါ်က နှင်းစက်တစ်ခုရဲ့ ခြေရာကောက်ကြောင်းအတိုင်း နင်လိုက်လာလို့ အဆုံးမှာ ငါ ရှိနေတယ်ဆိုရင် နင်လက်ခံမှာလား ငရဲ ရယ်")....
သူမဗီရိုကိုဖွင့်လိုက်သည်.. အင်္ကျီတစ်ထည်ကိုယူဝတ်လိုက်သည်.. သူမ စထားမိသော ဇာတ်လမ်းအတွက် အကျိူးဆက်ကို သူမရဲရဲခံယူဝံ့ရမည်... သူမ၏ တွေဝေမှုတွေကြောင့် သင်တန်းဆင်းပွဲအထိတောင် ရောက်ခဲ့ရပြီ.. ရဲသွေး၏ ခံစားချက်ကိုနားလည်သည်.. သူမ၏ အတ္တတစ်ခုကြောင့် ရဲသွေး၏ မေနှင်းစွဲလမ်းမှုရောဂါပိုဆိုးလာမည်ကို မလိုလား... ထို့အတွက် ဒီနေ့ သူမရဲသွေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်စွာလက်ခံရမည်.. မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် သူမ အကောင်းဘက်က တွေးရင်း.. ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးမိသည်...
(" မေနှင်းနဲ့ ငါနဲ့ကတကယ်တော့တူတူပဲဟာ.. သူသိသွားရင်လဲ.. ........ဟင်းးးးးး")
ဗိုလ်ကလေးဈေးလမ်းကို ချိုးဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ.. တီရှပ်အင်္ကျီ အဖြူ နှင့် ပုဆိုးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ကာ Y.E.S တိုက်အောက်တွင် ရပ်နေသော ရဲသွေးကို တွေ့လိုက်ရသည်.. သူ နွေနှင်းကို မြင်တော့ ပုံမှန်းအတိုင်း ရီ၍လက်ပြသည်..
"နင်လာတာနောက်ကျတယ်နော်.. ငါက နင်မလာဘူးမှတ်နေတာ.. သင်တန်းနောက်ဆုံးနေ့လေးတော့ ၂ယောက်တူတူလာတာဟုတ်ဘူး"
"အေး..နဲနဲနောက်ကျသွားတယ်.." နွေနှင်း အားအင်တွေယုတ်လျော့နေသည် ဘယ်ကဘယ်လို စပြောရမှန်းမသိ...
"ငါ.. ငါ... နင့်ကိုပြောစရာရှိတယ်.. နင်စိတ်မဆိုးစေချင်ဘူး".. နွေနှင်း ထစ်ထစ်အအ ဖြင့်စကားစလိုက်သည်..
"အေး.. ပြောစရာရှိနောက်မှပြော.. ငါလည်း ဒီနေ့ ကိစ္စတစ်ခုကို သေချာသိပြီးရင် လုပ်စရာရှိတယ်.. ခုတော့ အတန်းနောက်ကျနေပြီ.. သွားမယ်လာ.. "
နွေနှင်းပြောမထွက်ခဲ့... သူ့နောက်မှ ခေါင်းငိုက်စိုက်ဖြင့်လိုက်သွားသည်.. အတန်းနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်၍ ဂိမ်းများ ကစားကြ ပစ္စည်းများလဲကြဖြင့်.. မပျော်နိုင်သူက နွေနှင်း.... အနည်းဆုံးတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မဆုံးရှုံးချင်...
သူမကို မေနှင်းကဲ့သို့ ခံစားချက်မျိုးဖြင့် လက်ခံမည်ဆိုက အတိုင်းထက် အလွန်ဝမ်းသာမိမည်..
သင်တန်းဆင်းပွဲအစပိုင်းတွင်သာ ရဲသွေးကို တွေ့လိုက်သည်.. ခဏနေတော့ သူ့ကို ရှာမတွေ့တော့.. နွေနှင်းလိုက်ရှာနေမိသည်..
နောက်ဆုံး အတန်းပြင် ဆရာမများနားနေရာနေရာ၌ ရဲသွေးကို ဆရာမနားကပ်၍ သဲကြီးမဲကြီး မေးနေသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်..
ဆရာမလဲ အတန်းထဲက ထွက်လာသော နွေနှင်းကို မြင်လိုက်သည်နှင့်
"ကဲ.. သူ့ကိုသာမေးကြည့်လိုက်တော့ သားရေ.." နွေနှင်းဘက်လှည့်ကာ.. "သမီးရေ.. မေနှင်းတကယ်ရှိမရှိဆိုတာ.. "..
နွေနှင်းကြောက်သည်.. ဒါပေမဲ့ ပြောမှဖြစ်မည်.. သူမစိတ်ထဲ၌ ရှိနေတာတွေကို ရဲသွေးသိသွား၍ သူမကို အထင်သေးမည်စိုးသည်..
နွေနှင်း ဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ် ရီချင်ယောင်ဆောင်လိုက်သည်..
"ဟား.. ဟား.. နင်ကလဲ.. ဘာများလဲလို့.. မေနှင်းဆိုတာဘယ်သူလဲ... သိတောင်မသိဘူး.. ဟား.. ဟား.. နင့်ကို ငါနောက်ထားတာ.. တကယ်ယုံတာကို.. တကယ်ကြီးကိုယုံတော့တာပဲ.. တုံးတာက.. နေပါအုံး.. ခုမှဘာလို့ဒီလောက်သေချာသိချင်နေတာလဲ"
ရဲသွေး ဘာမှပြန်မပြောနိုင် .. သူတော်တော်လေး ခံစားသွားရပုံများသည်.. နွေနှင်း စိတ်ထဲမှ ပြင်းပြင်းပြပြ တောင့်တနေမိသည်.. ရဲသွေးရဲ့ အကြည့်နွေးနွေး...
ရဲသွေး၏ စက်ဆုပ်မုန်းတီးမည့် မျက်လုံးမျိုးကို ရနိုင်သည်ကိုလဲ နွေနှင်းကြိုတွေးထားမိသည်.. ထိုတခဏတာသည် နွေနှင်းအတွက်တော့ မျှော်လင့်ခြင်းများနဲ့စောင့်စားနေရသည့် ရာစုနှစ်တခုကဲ့သို့ကြာသည်ထင်ရသည်..
သို့သော် သူမတွေ့လိုက်ရသည်က ရဲသွေး၏ စိတ်ပျက်အားလျော့သွားသော မျက်လုံး နဲ့.. သက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ခုအဆုံး၌
သူ နွေနှင်းကို ဘာမှဆက်မပြော ခေါင်းငိုက်စိုက်ဖြင့် ထထွက်သွားသည်.. နွေနှင်း ဘာပြောရမှန်းမသိ.. ဘယ်လိုအားပေးရမလဲမသိ..
ဆရာမက "သား.. ဒီမှာ သား စီဒီကျန်ခဲ့ပြီ.." သူ မကြားနိုင်တော့... နွေနှင်းကြည့်လိုက်တော့ စီဒီတချက်..
"သမီးလိုက်ပေးလိုက်မယ် တီချယ်.. "
"အင်း.. ဒီပေါ်မှာတော့ မေနှင်းအတွက်လို့ရေးထားတယ်.. ဒီတော့ သမီးအတွက်ပဲပေါ့.. စိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်.. သူငယ်ချင်းကို လိုက်ချော့လိုက်အုံး.."
ထိုနေ့က ရဲသွေးကို နွေနှင်းရှာမတွေ့တော့.. နောက်ရက်များတွင် ဖုန်းခေါ်သော်လဲ ရဲသွေးနှင့်မတွေ့.. သူခံစားရသလို နွေနှင်းလဲခံစားနေရသည်ဆိုသည်ကို သူကတော့မသိနိုင်.. နွေနှင်းက တော့ သူမအပြစ်နှင့်သူမ ၂ယောက်စာခံစားနေရသည်.. ရဲသွေး မေနှင်းအားပေးမည့် စီဒီထဲမှ သီချင်းများကို နားထောင်မိတိုင်း နွေနှင်းငိုမိသည်.. ရဲသွေးရဲ့ နှလုံးသားခံစားချက်များနှင့် မြတ်မြတ်နိုးနိုးချစ်၍ ရွေးထားသော သီချင်းတွေပါလားဟုတွေးမိတိုင်း နာကျင်မိသည်... ရိုးသားနုညံ့သော နှလုံးသားတစ်စုံကို မရည်ရွယ်ပဲ သူမ ပျောက်ကြားစစ်တိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့သည်.. ထိုသို့ဆိုလျှင် ဤတိုက်ပွဲတွင်၂ဘက်လုံး စစ်ရှုံးခဲ့သည်.. စစ်ပွဲကို စတင်မိသော သူမသာလျှင် စစ်လျှော်ကြေးအနေဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်.. သူ ၏စိတ်ထဲ၌ မေနှင်းနေရာတွင် သူမအစားထိုးမ၀င်နိုင်မှန်း သူမ တဖြည်းဖြည်း ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လက်ခံလာသည်..
------------------------- ။ --------------------------
နောက်ဆုံး ခြေရာ (သို့) ခြေရာ (၇)
သူမ နေ့တိုင်း ရဲသွေးကို ဖုန်းခေါ်ခဲ့သည်မှာ.. ၁ ပတ်လောက်ပင်ရှိခဲ့ပြီ... ၁ရက် သူမဆီကို ဖုန်းလာသည်..
"ဟာ... ငရဲ... နင်.. ငါ့ဆီနင်ဖုန်းဆက်တယ်??? ...ငါ့ကို စိတ်ဆိုးနေတာလား..?? ငါဟိုနေ့တွေတုံးက နင့်ဆီဆက်တယ်.. နင်နဲ့မတွေ့ဘူး.. ငါ့တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ.. စိတ်မဆိုးနဲ့နော်... "
"ရပါတယ်ဟာ... စစချင်းတော့ စိတ်ဆိုးတာပေါ့ ခုတော့မဆိုးတော့ပါဘူး.. နင့်အပြစ်မှမဟုတ်တာ... ဒါပေမဲ့ဟာ.. နဲနဲတော့ခံစားရတာပေါ့.. ငါကိုက တုံးခဲ့တာပါ"
("အော်... မေနှင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ကိစ္စက ငါ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လား.. နင့်စိတ်ထဲမှာ ငါနဲ့ မေနှင်းဆိုတဲ့ ငါ့ကိုယ်ပွားက အဆင့်တော်တော်ကွာတယ်နော်... ငါက နင့်အတွက် စိတ်ဆိုးရလောက်အောင်တောင် အရေးမပါဘူးတဲ့လား ဟယ်..")
နွေနှင်း အသံကို ပုံမှန်အသံမျိုးထိန်းကာ....
"အဲလိုလဲ ဟုတ်ပါဘူးဟာ.. နင်မယုံလို့တောင် နောက်ဆုံးနေ့အထိ မေးနေသေးတာပဲ.. "
"ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဟာ.. ငါ YES က IELTS အတန်းတက်မလို့.. နင်တက်အုံးမလား.. အဲဒါပြောမလို့.. "
ရဲသွေးခုလို သူမကို သင်တန်းတက်ရန်ခေါ်သောကြောင့် သူမ၀မ်းသာသည်.. အမှန်တော့ ရဲသွေးသည် သူမထင်ထားမိသည်ထက် ပို၍ တည်ကြည်သည် ယောင်္ကျားဆန်သည်.. သူမကို ခွင့်လွှတ်တဲ့အတွက် သူမ၀မ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရသည်.. ရဲသွေးနှင့် နောက်တစ်ခါ ဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်.. သူငယ်ချင်း သာလျှင် အဖြူစင် အခိုင်မြဲဆုံး ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်..
"အေး.. တက်မှာပေါ့... ဘယ်နေ့ဖွင့်မှာလဲ.. "
ထိုသို့ဖြင့် နောက်ထပ်သင်တန်းတစ်ခုတူတူတက်ဖြစ်ကျသည်... ရဲသွေး၏ အကြည့်နက်နက်တွေကိုတော့သူမဘယ်တော့မှပြန်မရတော့..
ရဲသွေး၏ စိတ်ထဲ၌ မေနှင်းဆိုသော ကောင်မလေး အမြဲစိုးမိုးနေသေးသည်ကို နွေနှင်းတခါတလေ စကားပြောကြည့်တိုင်းသိနေသည်..
"ဟဲ့.. ငါမနက်ဖြန်မနက် ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘုရားသွားချင်လို့်.. .. နင့် ကားအားရင် လိုက်ပို့ပါလား.. မုန့်ကျွေးမယ်လေ.. "
"အာ... ပို့ပေးပါဘူး ဟာ.. ငါမထနိုင်ဘူး"
"နင်နော်.. ငါ မေနှင်းအိုက်တင်နဲ့ နင့်ကို ပြောလိုက်ရမလား.. ဒါမှပို့ပေးမယ်ထင်တယ်.. " နွေနှင်း ရီ၍စလိုက်သည်..
ရဲသွေး မျက်နှာ ရုတ်တရက်ပျက်သွားပြီး... ခဏနေမှ ပြုံးကာ...
"အေးပါ... မေနှင်းဆိုလို့ကတော့ပြောစရာကိုမလိုဘူး.. အေး.. မေနှင်းပုံစံတော့မလုပ်နဲ့.. စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် ဖတ်နမ်းပြစ်မှာ.. ကဲပါ လိုက်ပို့ပေးမယ်.. မေနှင်းဆိုတာကိုတော့ ထပ်မပြောနဲ့တော့.. မနက်ဖြန် ဖုန်းဆက်ပြီးနှိုးလိုက်.." သူပြောပြီး မျက်နှာလွှဲသွားသည်..
သူမ.... နှင်းစက်တစ်ခုဖန်တီးကာ ရဲသွေး၏ နှလုံးသားတွင်း၌ ခြေရာချန်ရစ်ခဲ့မိသည်..
ထိုနှင်းစက်ခြေရာများအတိုင်း လှမ်းလျှောက်လာခဲ့သော ရဲသွေးဆိုသည့် ကောင်လေး၏ ခြေရာများမှာလဲ သူမနှလုံးသားပေါ်တွင် ပျောက်ပျက်တော့မည်မဟုတ်... ၂ယောက်ထဲသာရှိသော ၃ ပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်းတွင် သူမ၏ ပြိုင်ဘက်သည် သူမကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပြီး.. ဤပြိုင်ပွဲကို သူမဘယ်တော့မှ ပြန်မနိုင်နိုင်တော့..
ရဲသွေး၏ ကြည်လင်သော အကြည့်တွေဖြင့်သာ.. သူမ ရိုးသားရောင့်ရဲစွာ ရင်ခုန်တော့မည်.....
ယခင်က ရဲသွေးကို သိမယ်ဟု ကျိတ်ပြီး ကျုံးဝါးခဲ့သော နွေနှင်း ယခုတော့ သူမဟန်ဆောင်မှုများ၏ တန်ပြန်မှုများကို အပြည့်အ၀ခံစားရမည်..
("အော်.. လောကမှာ ဟန်ဆောင်သူတွေဟာ ဟန်ဆောင်နေတဲ့ အချိန်မှာရော.. ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အချိန်မှာပါ ၂ခါပူလောင်ရတဲ့သူတွေပါလား.. ")
သူမ၏ဟန်ဆောင်မှုများကြောင့်... ကံကြမ္မာက ယခုထိသူမကို ဒဏ်ခတ်ကာ ခံစားချက်များကို ဟန်ဆောင်မြိုသိပ်သွားရတော့မည်....
---------------------------------- ပြီးပါပြီ ---------------------------------
စာရေးသူဆုတောင်း ။ ။ ဟန်ဆောင်ကင်းသော ချစ်ခြင်းများဖြင့် ဆုံစည်းနိုင်ကြပါစေ...
Posted by mabaydar at 6:13 PM
5/23/2008 11:04 PM
အစကတော့ ပျင်းလို့ဖတ်တာ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း
ပြီးပါပြီထိ ဆွဲခေါ်သွားတယ်...... D;
ဒါမျိုး အသစ်ကလေးတွေ မျှော်နေမယ်။
5/24/2008 9:53 AM
and, the pics.. are good too..
5/25/2008 4:44 AM
ရဲသွေးတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်တာကို မျှော်နေတယ်...။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာကိုဝင်မတွေးပေးဘူး..။ နွေနှင်းတစ်ယောက် တော်တော်ခံစားရတာပေါ့...။ ၀တ္ထုထဲမှာတော့ ဒါတွေက ဖြစ်တတ်ပါတယ်...။ ရေးဟန်လေး ကောင်းပါတယ်ဗျား...။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ဖတ်သူ စွဲလမ်းစေတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးများ ဒီ့ထက် များများနဲ့ ကောင်းကောင်း ရေးထုတ်နိုပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါကြောင်း...။ ၀တ္ထုများ ကြိုက်တတ်ရင်ဖြင့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရေးထားတာလေး မျှဝေပါရစေ...။ http://jewelofjewel.blogspot.com တဲ့...။ ရေးအား ကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ...။
5/25/2008 12:31 PM
ရဲသွေးက နွေနှင်းသူ့ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ သိမှမသိတာ.. ဟိုကလဲပြမှမပြတာ.. ဒါပေမဲ့သူကလဲနွေနှင်းလို type မျိုးကိုမှမကြိုက်တာ...
ညီမရေ ဒီ စာသား ကိုတော့ အမ တော်တော် ​သဘောကျမိတယ်. "ငါက နင့်အတွက် စိတ်ဆိုးရလောက်အောင်တောင် အရေးမပါဘူးတဲ့လား?"
Very nice one. Looking forward to read more posts. Thank you for your time.
6/02/2008 3:56 AM
taw taw kg tal ...akhu mha read mi tar.... taw taw kyite tal... :)
btw, bar loe sat ma yay tot tar lal hin.... other wit htu lay tway sat yay par lar.... :)
12/07/2009 2:52 PM